Iwe unoda here kuti mudiwa wako anzwe kutarisirwa kwako, kunyangwe ivo vari kure newe? Kuti unzwe kudziya kwako nemuviri wako? Wobva waita chokwadi chekumurukira juzi kwaari. Juzi revarume nemhembwe, yakapihwa munhu anodikanwa, ...
Munchkin mutambo: mitemo
Isu tese tinoziva kunakidzwa kwemabhodhi mitambo ingave. MuRussia, mutambo webhodhi "Monopoly" unotora nzvimbo yekutanga mukuzivikanwa. Panzvimbo yechipiri mutambo webhodhi "Munchkin", uyo unotambwa nekunakidzwa ...
Modular origami inovhara dzakasiyana dzakasiyana misoro. Maruva, mhuka, mota, zvivakwa zvinogona kugadzirwa kubva pamapepa. Sarudzo yakakura kwazvo. Origami kubva kuRuva ma module kuwedzera kwakanaka kune chero nzvimbo yemukati. Zvakadai ...
Mumamiriro ezvinhu azvino uno, apo musika uri kufashukira nezvinhu zvakagadzirwa nevakawanda, mabasa emaoko ari kuramba achidikanwa. Mumaguta, madhipatimendi akasarudzika uye zvitoro zvese kana masalon anotanga kuoneka, kwavanotengesa ...
Pakutanga kuona, zvinogona kutaridza kuti kudzidza kutamba chess kuri nyore, asi pachokwadi zvinotora nhamburiko zhinji uye kubata nemusoro mishoma mitemo. Nhoroondo yezvinoitika Vanhu ...
Openwork pateni "Shell" ine knitting tsono: scheme uye tsananguro
Lace inopa runako rwakakosha kuzvinhu zvakarukwa. Ndicho chikonzero nei vakadzi vezvigadzirwa vari kuyedza kugona seyakavhurika mapatani sezvinobvira. Iyi sarudzo yechokwadi-yemoto yekushongedza chero chipfeko, zvisinei nemwaka. Muchinyorwa, isu tichaona kuti zvinokwana sei ...
Bvumiranai kuti hapana shangu, kunyangwe shangu dzemhando yepamusoro, dzinodziisa makumbo evana vako mumachando echando zvirinani pane bhutsu zvakajairika. Ndizvo chaizvo zvakajairika. Uye saka ndinoda kuti makumbo emwana ave ...
Iyo mink jasi kukwezva kwewadhiropu iyo, pamwe, mukadzi wese anoda kuve nayo. Zvigadzirwa zvakagadzirwa kubva kuhuswa hwepanyama zvakagara zvichikosheswa uye zvaive mumafashoni. Chinhu chinodhura zvakanyanya, ndipo pazvinoda kuti zvichengetedzwe. ...
Goredzva izororo rakanaka. Inosiyaniswa kwete chete nemashiripiti mamiriro, kwete chete nekutarisira kwemufaro uye kutarisira zvipo, asiwo nemukana wekupfeka mune isina kujairika carnival koshitomu, kujairira mufananidzo weiyo ...
Nhasi, mifananidzo yakatorwa neako pachako pane kamera kamera yave kuita mhando inozivikanwa kupfuura kudhirowa mifananidzo. Kana iwe uchida yakakwana makeup, yakanaka bvudzi uye zvinonakidza zvishongedzo zvemhando yepamusoro kupfura, unogona kutora selfie ...
Musikana ane bvudzi dzvuku-akapenya akazozivikanwa mushure mekuteedzeredzwa kwenyaya dzemabhuku nemunyori weSweden. Uye hazvishamise kuti vana vazhinji vanosarudza uyu chaiwo mufananidzo wecarnival koshitomu. Kupenya uye kureruka ...
Dzimwe nguva zvinoita sekunge nguva yechando inguva yekusuwa uye kuzvivharira mumba mako, wakaputirwa negumbeze rinodziya remakushe nebhuku kana tii mumaoko ako. Asi haufanire kutarisa izvi dzimwe nguva kuchinaya uye ...
Dhodecahedron chimiro chisina kujairika chakapetana katatu, chine zviso gumi nezviviri zvakafanana, chimwe nechimwe chayo chiri pentagon yenguva dzose. Kuunganidza dodecahedron nemaoko ako pachako, hazvitombodiwa kuti uve nehunyanzvi hwe 12D ...
Pepa ingangove iri nyore kuwana zvinhu izvo zvinogara zvichinakidza kushanda nazvo. Iwe unogona kugadzira emhizha zvigadzirwa, maposadhi, maruva, maruva, shiri, mhuka nezvimwe zvakawanda kubva mairi. Funga maitiro ekugadzira peacock kubva ...
Nzira yekugadzira mapapiro kuti "ubhururuke" kumasikisi uye muhupenyu?
Mumakirabhu emazuva ano, masquerade anodhura uye akasiyana emapati ane themed anowanzoitwa. Asi zvipfeko zvemafaro hazvibatsiri ivo chete. Vazhinji vedu tinonakidzwa kutora chikamu mumapikicha emifananidzo, tichigadzira zvisina kujairika, ...
Kugadzirwa kwepepa panguva imwe chete kwakaita shanduko chaiyo, sezvo zvaiita kuti zvikwanise kusiya kushandiswa kwematehwe anodhura. Nekuda kweizvi, huwandu hwemabhuku hwakawedzera, uye ruzivo rwakawanikwa kune vanhu vazhinji. Wakatotanga…
Nhasi tichakuudza maitiro ekupinza imbwa mune zipi. Uyu mubvunzo unogona kuve wakakodzera nekuda kwezvikonzero zvakasiyana: imbwa inogona kutyoka, kurasika kana kusvetuka kubva panjanji. Kazhinji chigadzirwa chine yakafanana ...
Mwenje yedenga inozivikanwa pasi pemazita akasiyana siyana, anonyanya kudaidzwa ese ari maviri "Chinese" uye "mabhora ezvishuwo." Zvinotendwa kuti usati waburitsa chimiro chakapinza mudenga, zvakakosha kuti unyore yako wega ...
Pepa chinhu chakasarudzika zvekugadzira. Vana vanonamata zvivakwa zvayo: kugumbuka, kubvarura kuita zvidimbu, kutora chero chimiro pasi pesimba rezvigero, shanduka kubva pahwendefa rakadzika kusvika pamatatu-mativi semhedzisiro yekupeta ...
Munguva pfupi yapfuura, zvigadzirwa zvakasiyana kubva mukunzwa uye kunzwa zviri kuwedzera mukurumbira. Zvinhu zvakagadzirwa kubva kune izvi zvinhu zvinosiyaniswa nehunyanzvi hwavo uye kunyatso kuoneka. Kubva pane ino chinyorwa iwe uchadzidza ...
Mibvunzo ye52 mu database yakagadzirwa mu 0,469 masekondi.